ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းတောင်ဘက်တူရကီ၏တည်ရှိပြီးအရှေ့မြေထဲပင်လယ်အတွင်းတိုင်းပြည်, အဲဂုတ္တုမြောက်ဘက်, ဆီးရီးယားနှင့်လက်ဘနွန်, ဂရိနိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ပါလက်စတိုင်း၏အနောက်မြောက်ဘက်၏အနောက်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတရားဝင် "ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာ 1.2 သန်းမှာခန့်မှန်းခြေလူဦးရေနှင့်အတူမြေထဲပင်လယ်အတွင်းတတိယအကြီးဆုံးနှင့်တတိယလူဦးရေအများဆုံးကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။
1974 ခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းစစ်တူရကီကျွန်းကျူးကျော်ကိုဖန်ဆင်းသောတူရကီ Cypriot နှင့်ဂရိ Cypriot အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအညီ 1974 အတွက်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ပြီးတာနဲ့, တူရကီ (မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်ခေါ်) ကျွန်း၏ 1 /3ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ဂရိ Cypriot ကထိန်းချုပ်ထားအဖြစ်ကြွင်းသောအရာကြွင်းရ။ ၎င်း၏မြို့တော်နီကိုစီယာတစ်ဦး "အဘယ်သူမျှမဖွင့်မြေ" ကျွန်း၏ကျန်ကနေမြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်ခွဲထုတ်ကုလသမဂ္ဂတပ်များအားဖြင့်လိုက်ပါခဲ့ Buffer နှစ်ခု၌ဝေဖန်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ 1974 ကတည်းကနှစ်ဘက်အကြားဘယ်သူမျှမပဋိပက္ခများရှိခဲ့ပါပြီ။
အဆိုပါဆိုက်ပရပ်စ်ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများထိန်းညှိ။ 1878 ထံမှ 1960 အတွက်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးသည်အထိဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီများနှင့်နယ်မြေဖြစ်တော်မူပြီးမှ, ဆိုက်ပရပ်စ်အင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေစနစ်ကမွေးစားခဲ့သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်းပြည်အဖြစ်ဆိုက်ပရပ်စ်တိုးမြှင်ရာ 2004 အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်အမြဲစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (OECD ၏) White ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း စာရင်း.
• ယခင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီ: ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး၏ 80 နှစ်အတွင်း၏ရလဒ်အဖြစ်, အင်္ဂလိပ် (ဂရိပြီးနောက်) တရားဝင်ဒုတိယဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေက၎င်း၏ဥပဒေစနစ်အဖြစ်နိုင်။
• အီးယူအသင်းဝင်: 2004 ကတည်းကအီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တော်မူပြီးမှ, ထည့်သွင်းရန်အန္တရာယ်ကင်းရာအရပ်ကဲ့သို့ဆိုက်ပရပ်စ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုပေးသည်။
• မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ: ၎င်း၏ဂရိနိုင်ငံ, တူရကီ, အစ္စရေး, လေဗနုန်တောင်အတိုပျံသန်းမှုနှင့်အတူအရှေ့မြေထဲအပေါ်တည်နေရာ, အဲဂုတ္တုပြည်ကစံပြအချက်သည်ဤဒေသများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်စေသည်။
• အနိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်း: ဆိုက်ပရပ်စ်တစ် 12.5% နှုန်းမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဥရောပသမဂ္ဂမှာတွေ့ရှိနိမ့်ဆုံးတဦးဖြစ်သည့်တစ်ဦးအနိမ့်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းရှိပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုမဆိုနိုင်ငံသားအဖြစ်၏ဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်နိုင်မည့်တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူထည့်သွင်းဖို့တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
• တစ်ဦးဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက်စံပြ: ဆိုက်ပရပ်စ်သူ၏အခွန်ကုမ္ပဏီများမှကိုင်ထားဘို့အကျိုးရှိသောများမှာတစ်ဦးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကောင်းစွာသိသည်။ ထို့အပြင်မရှိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ (CFC) စည်းမျဉ်းများကုမ္ပဏီများမှကိုင်ပြီးအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ရပ်များပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြု, ရှိပါတယ်။
• Securities မှမရှိပါ Capital ကိုရဖို့အခွန်: ဆိုက်ပရပ်စ်လုံခြုံရေးကုန်သည်များရုံးများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတှကျလူကြိုက်များနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဤဘို့တအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်မှာတော့ကော်ပိုရေးရှင်းလုံခြုံရေးရောင်းအားအပေါ်အတွင်းသို့မဟုတ်အပြင်အခွန်ခွဲဝေတစ်ခုသို့မဟုတ် Capital ကို Gain အခွန် (CGT) စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
• လွယ်ကူသောဘဏ်အကောင့်: ဒါဟာဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖုန်းကျော်ကသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, စာရွက်စာတမ်းများ notarized နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ထည့်သွင်းကြသည်ဖြစ်သည်။
• နှစ်ချက်အခွန်ကောက်ခံမှုစာချုပ်များ: ဆိုက်ပရပ်စ်လေးဆယ်ကျော်နှစ်ဆအခွန်စာချုပ်များ (DTT) အခြားနိုင်ငံများသို့ဘေးကင်းစွာကချိတ်ဆက်နှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားသားများဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်နိုင်ငံများသို့အတူတူဝင်ငွေပေါ်နှစ်ဆအခွန်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်သေချာရှိပါတယ် ..
ဆိုက်ပရပ်စ်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းကအသုံးပြုမရဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်ထူးခြားသောနာမကိုအမှီကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျ, စာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်ဘာသာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်း name ကိုမှတ်ပုံတင်မတိုင်မီကလျှောက်ထားကော်ပိုရေးရှင်း၏အမည်ကိုမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်စစ်ဆေးပြီးတော့ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်မှတဆင့်ထိုနာမတျောအဘို့အခွင့်ပြုချက်ရယူနိုငျပါသညျ။ ဤသည်အီလက်ထရောနစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ အများပြည်သူကုမ္ပဏီများအတွက်, နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာ မြို့တော် 25,630 EUR ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာနိမ့်ဆုံးတဦးဖြစ်သည့် 12.5% ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး 750 EUR အကြောင်းကိုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းမီ, ရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာသည်အမည်များကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများကနောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာခြင်းငှါဆန္ဒရှိလျှင်, သူတို့သည်ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်ငှားရမ်းနှစ်စဉ်အကောင့် ပြင်ဆင်. , မေတ္တာရပ်ခံသည့်အခါဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးမှတ်တမ်းများတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဤအစည်းအဝေးများဆိုက်ပရပ်စ်နေရာယူရန်မလိုပါ, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာရာအရပျယူနိုငျသညျ။
ဆိုက်ပရပ်စ်အပါအဝင်ယင်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းမှမြောက်မြားစွာအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: တစ်ယခင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေစနစ်အအသုံးပြုသောနှင့်အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်အဖြစ်, ဆိုက်ပရပ်စ်ဗျူဟာမြောက်ဂရိနိုင်ငံနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှအနီးကပ်တည်ရှိသောတစ်ဦးအီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ဒါရိုက်တာများမှာ လိုအပ်သော, အနိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများအတွက်စံပြတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူ။